Mihantitra ihany koa ireo maherifo rehefa asehon'ity mpanakanto ity | Famoronana an-tserasera
Ny fanatrarana ny zokiolona dia zavatra iray hikasika antsika rehetra io ary ampahany amin'ity fiainana ity, tahaka ny hanjo an'ireo mahery fo ireo fa, misaotra mpanakanto iray, ahafantarantsika azy ireo raha toa ka nanana ny taonany izy ireo. Na dia manome ahy aza izany fa tsy hitranga velively izany, satria ny toetra tsara ananan'ireo olo-malaza ireo dia ny hijanonany foana amin'ny endriny tsara indrindra sy amin'ireo hery ireo izay mbola miasa toy ny hatsarana.
Eddie Lu, mpanakanto monina ao Shanghai, dia namorona fanoharana fohy izay eritreretinao ho iray amin'ireo maherifonay ankafizinay indrindra raha antitra toy ny olona hafa izy ireo. Hevitra tsara hanehoana amintsika ny fomba hitrangan'ireo hery ireo amin'ireo maherifo izay niaina fotoana tsara sy voninahitra tsara kokoa.
Araka ny fandikan'i Liu, ireo maherifo ireo, izay azontsika atao mahita superman na batman, very ny ampahany amin'io tanora sy tanjaka io, saingy mbola mitazona ny ampahany amin'io fahalehibiazana io izy ireo satria olona efa nanaraka ny fiainany an-tapitrisany sy ny hafaliany.
Adikao ity karazana ity olo-malaza kolontsaina pop malaza mety hahaliana sy mahaliana ihany. Phillip sevy ary ny fianakavian'izy ireo mahery fo an'ny maherifo na Khoa ho ary ny fomba nanehoany ny maherifo ankafiziny dia iray amin'ireo ohatra lehibe indrindra azontsika jerena amin'ny famoahana teo aloha.
Fomba iray mahaliana an'ireo maherifo antitra izay mamoy ny ainy amin'ny endrika ivelany, saingy manohy mitazona ny tenany, araka izay tratra, miaraka amin'ny akanjo manokana. Ny ketrona sasany izay mitarika antsika amin'ny fomba hafa hahagaga antsika ary azo antoka fa hiverina any amin'ireo sary an-tsary izay tazomintsika ao anaty vatasarihana na ireo virtoaly kokoa amin'ny endrika fampiharana amin'ny fitaovana finday mitady fomba hafa hanatonana ny mpihaino tanora kokoa fa mila endrika hafa izy ireo.
Afaka manatona ny tranokalan'ny mpanakanto en arttation.com.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto iray mampiseho ny fahanteran'ny maherifo isan-karazany